စတင်သူများအတွက် စျေးနှုန်းလုပ်ဆောင်ချက် ကုန်သွယ်မှု - အများဆုံးအမြတ်အစွန်းကို ပြုလုပ်ပါ။ ဇွန်လ 2022
စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သွယ်မှုတွင်2ကုန်သွယ်မှု 2022 လမ်းညွှန်ကိုလေ့လာပါ။
စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုနှင့် လွှဲကုန်သွယ်သည့်နေရာများသည် ဗျူဟာများဖြင့် ပြည့်ကျပ်နေသည်။ အချို့က အာရုံစိုက်နေချိန် ဉီးခေါင်းရေ အလွန်သေးငယ်သော အမြတ်အစွန်းများကို အခြားသူများက အလယ်အလတ်ကာလတွင် ကြည့်ကြသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် - သူတို့အားလုံးမှာ တူညီတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်များသည် မြင့်မားသောအဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများနှင့်ဇယားဖတ်ခြင်းကိရိယာများကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံခြေလှမ်းတစ်လှမ်းလှမ်းပြီးရှေ့တွင်ရှိသောအရာကိုကြည့်ရှုခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို“ စျေးနှုန်းရောင်းဝယ်မှု” ဟုခေါ်သည်။ အခြေခံများသို့ပြန်သွားခြင်းအားဖြင့် - သင်၏အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းကိုလက်ယာဘက်ခြေထောက်ပေါ်ချရန်အခွင့်အလမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဤလမ်းညွှန်တွင်ဈေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။ စာဖတ်ခြင်း၏အဆုံးတွင်သင့်အနေဖြင့်မှန်ကန်သောစွန့်စားမှုနှင့်ဆုလာဘ်အချိုးအစားကိုမှန်ကန်စွာအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောကိရိယာများအားလုံးရပါလိမ့်မည်။
သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တစ်ခုအတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကိုလေ့လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုမှာကုန်သွယ်မှုအပြောင်းအလဲများ၊ အစွဲအလမ်းများနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းစသည့်အသုံး ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်ကိန်း (သို့) ဇယားအသိအမှတ်ပြုမှုကိုအသုံးပြုမည့်အစားဈေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သွယ်မှုသည်ကုန်သွယ်မှု၏အခြေခံများသို့ရောက်ရန်အကြောင်းဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်စျေးနှုန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပုံစံတစ်ခုမှာဂျပန်ဖယောင်းတိုင်ဇယားများဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်တစ် ဦး ချင်းစျေးနှုန်းမဟုတ်ဘဲစျေးနှုန်းအပေါ်ရွေ့လျားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ သတင်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းကိုပေါင်းစပ်။ ရှုမြင်နိုင်သည်။
ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးနေကြောင်းတွေ့ရှိပါကသင်၏အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်အကိုင်တစ်ခုမှာသင်လိုအပ်လျှင်ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်အန္တရာယ်များကိုတက်ကြွစွာစီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်သည်။ သန်းပေါင်းများစွာသောသူတို့သည်စျေးကွက်များမှတစ်ဆင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များ၊ ထင်ကြေးမပေးသူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ထင်မြင်ယူဆရန်နှင့်တုံ့ပြန်ရန်အလွန်ကောင်းသောစိတ်ကူးမဟုတ်ပါ။
ကုန်သည်တစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်သည်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းမွန်သောနားလည်မှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်အနာဂတ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိအချိန်နှင့်အမျှအရင်းအနှီးစီးဆင်းမှုတိုင်းကိုကြည့်ရှုသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်သူတို့၏ငွေကြေးဆိုင်ရာထိတွေ့မှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကြိုးစားသည့်ဘဏ်တစ်ခု၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဂျပန်မှကင်မရာများဝယ်ယူသည့်ယူကေစမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး JPY (လကုန်ခါနီးတွင်၎င်း၏လက်ကျန်ငွေများကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကြိုးစားသည့်အာမခံရန်ပုံငွေတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
စွန့်စားမှုစိတ်ဓါတ် - သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များ (ပါ ၀ င်သူများ) ကမည်သို့ခံစားနေပြီးမည်သို့ပြုမူနေသည်ကိုသရုပ်ဖော်ရန်စွန့်စားရသည့်စိတ်ဓာတ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ကုန်သည်များအနေဖြင့်ရောင်းရန်သို့မဟုတ်ဝယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်၎င်းတို့မည်မျှမျှော်လင့်မည်၊ မည်မျှဆုံးရှုံးရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းကိုကောင်းစွာအရိပ်အမြွက်ဖော်ပြသည်။
စွန့်စားမှုစိတ်ထားသည်အခြေခံအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုန်သည်များအနေဖြင့်မည်မျှစွန့်စားလုပ်ကိုင်လိုသည်ကိုကြေငြာခြင်းဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းသည်ဘဏ္assessmentာရေးဈေးကွက်တစ်ခုလုံး၏သဘောထားနှင့်တူသည်။ စျေးကွက်တစ်ခုလုံးအပေါ်စွန့်စားမှုအပေါ်ထားရှိသည့်သဘောထားနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်သင်၏ငွေများကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းသင်ယူလိုသောအန္တရာယ်များစွာနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်တစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အန္တရာယ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဟာအန္တရာယ် (သို့) ဆုံးရှုံးမှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကစျေးကွက်ထဲမှာနေရာရပြီဆိုရင်၊ သင့်ကုန်သွယ်မှုဟာဆုံးရှုံးမှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ကုန်သည်တစ် ဦး ၏စွန့်စားရသည့်စိတ်ဓာတ်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလမ်းညွှန်ပေးသည့်အဓိကစိတ်ခံစားမှုအားနည်းချက်နှစ်ခုရှိသည်ဟုလူသိများသည်။
သူတို့ကလောဘကြီးပြီးကြောက်ရွံ့နေတယ် - ဘဏ္marketာရေးဈေးကွက်ကအဲဒီလိုလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။
ဘဏ္marketာရေးစျေးကွက်ရှိလုပ်ငန်းအများစုကိုရေတိုကာလအပေါ် အခြေခံ၍ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားခြင်းကြောင့်သင်ကုန်သွယ်မှုသို့လျင်မြန်စွာထွက်ခွာနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဓါတ်များကိုအပြည့်အဝနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ကြသည်။ အရေးကြီးသည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုန်သည်များ၏အပြုအမူကိုဖော်ပြပြီး၎င်းတို့သည် 'လုံခြုံမှုရှာရန်' သို့မဟုတ် 'အန္တရာယ်ရှာဖွေရန်' ဖြစ်နိုင်သည်။
ဘဏ္mediaာရေးမီဒီယာများသည်စျေးကွက်သည် 'စွန့်စားမှုရှာဖွေရန်' သောအခါပတ်ဝန်းကျင်ကိုရည်ညွှန်းသည် 'စွန့်စားမှု' ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ စျေးကွက်သည်ပုံမှန်ထက်နိမ့်ကျသည့်ပုံမှန်စျေးနှုန်းအပေါ်မတည်ငြိမ်မှုလက္ခဏာများကိုပြသသောအခါ - နှစ် ဦး စလုံးတက် နှင့် စီးပွားရေးအချက်အလက်များကဤအချက်ကိုထောက်ခံသည့်အနေဖြင့်အလားအလာရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
'စွန့်စားရမှု' အခြေအနေများရှိပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုန်သည်များသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအမြတ်အစွန်းကိုရှာဖွေရန်ပိုမိုအကောင်းမြင်လာကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလုံခြုံစိတ်ချရသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ် 'အန္တရာယ်ရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများ' ကိုဝယ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ '
အမြင့်ဆုံးအလျှော့ပေးငွေများ (ဥပမာနှစ်ခုဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျဒေါ်လာနှင့်ဘရာဇီးအစစ်အမှန်)
နှင့် (အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်) စတော့ရှယ်ယာ။
ဘဝ၌ရှိသောအရာအားလုံးနှင့်ဆင်တူသည်နှင့်အမျှသင်အဆင်ပြေနိုင်သည့်အန္တရာယ်ပိုများလေ၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကမင်းကအခြားလမ်းကိုသွားမယ်လို့လည်းစွန့်စားတယ်။
ဘဏ္mediaာရေးမီဒီယာသည်စျေးကွက်လုံခြုံစွာရှာဖွေသည့်အခါပတ်ဝန်းကျင်ကိုရည်ညွှန်းရန် 'စွန့်စားမှု' ဟူသောဝေါဟာရကိုအသုံးပြုသည်။
အကယ်၍ စျေးကွက်များသည်မတည်ငြိမ်မှုများစွာကိုဖော်ပြနေပြီးစီးပွားရေးခန့်မှန်းချက်သည်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်နေလျှင်သို့မဟုတ်ယိုယွင်းပျက်စီးနေပါကအန္တရာယ်ကို 'စွန့်စားမှု' အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကုန်သည်များအနေဖြင့်အန္တရာယ်များသောကုန်သွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်နည်းပါးသည်။
ကြီးမားသောဘဏ္crisisာရေးအကျပ်အတည်း (၂၀၀၈)၊ ပထဝီနိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်မှုများ (အရှေ့အလယ်ပိုင်းပconflictိပက္ခ၊ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော) သို့မဟုတ်မကြာသေးမီကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်း COVID-2008 (19) အားလုံးသည်စျေးကွက်အပေါ်အကြီးအကျယ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မည်။ စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်သည် 'စွန့်စားမှု' ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
တစ်ခါတစ်ရံကုန်သည်များသည်စွန့်စားရမှုမရှိခြင်းကိုသတိပြုမိကြသည်၊ ဤသို့ဖြစ်ပျက်လာသောအခါသူတို့လုပ်ဆောင်နိုင်သောလုပ်ရပ်နှစ်ခုရှိသည်။ ကုန်သည်များသည် 'လုံခြုံသောပိုင်ဆိုင်မှုများ' အတွင်းရာထူးများ (၀ ယ်ယူခြင်း) များသို့မဟုတ်ထွက်ပေါက်ရာထူးများ (ရောင်းချရန်) များကို 'အန္တရာယ်ရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများ' အတွင်းသို့ ၀ င်နိုင်သည်။ စျေးကွက်အထူးသဖြင့်ကြမ်းတမ်းသည့်အခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုန်သည်များသည်စီးပွားရေးပိုမိုဆိုးရွားလာပါကပိုမိုအကာအကွယ်ပေးထားသော 'လုံခြုံသောနေရာများ' ကိုမကြာခဏရှာဖွေလေ့ရှိသည်။
ဤကုန်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏အရင်းအနှီးကိုလုံခြုံသောပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့် 'နိမ့်စွန့်စားမှု' ပိုင်ဆိုင်မှုများသည်စွန့်စားမှုနည်းပါးသော်လည်းအကျိုးအမြတ်လည်းနည်းသည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေသည့်အချိန်တွင်အရင်းအနှီးကိုကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း (သို့) 'စွန့်စားခြင်းမှရှောင်ရှားခြင်း' အဖြစ်မှတ်ယူလေ့ရှိသည်။ ပြောခဲ့သမျှအားလုံးနှင့်အတူအအေးခဲသည့်ငွေသည်အကောင်းဆုံးလုံခြုံသည့်နေရာဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူသည်။
သင့်လုံခြုံသောနေရာအဖြစ် ငွေကိုမလိုချင်ပါက၊ အခြားရွေးချယ်စရာအချို့ ပါဝင်သည်။
စားသုံးသူများ၏အဓိကနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ within ရှိစတော့ရှယ်ယာများသည်စတော့ကုန်သည်များအတွက်လုံခြုံသောခိုလှုံရာတစ်ခုဖြစ်သည် ('ကာကွယ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုများ' ဟုလည်းခေါ်သည်) ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ စွန့်စားမှုစိတ်ဓာတ်ကအရမ်းအရေးကြီးတယ်၊ ဒါကိုအခြေခံသဘောပေါက်ထားခြင်းကသင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့အန္တရာယ်ကိုကိုင်တွယ်ရာမှာသင့်ကိုကူညီပေးလိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့သင့်ရဲ့မြို့တော်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကူညီလိမ့်မယ်။ စျေးကွက်များသည်နေ့စဉ်သို့မဟုတ်အပတ်စဉ်ပုံမှန်တက်ခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းများမကြာခဏဖြစ်တတ်သည်။ ၎င်းသည်စွန့်စားရသည့်စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲမှု၏ကောင်းသည့်အရိပ်အယောင်ဖြစ်သည် - ၎င်းသည်စျေးကွက်သည်အဘယ်ကြောင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသည်ကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်သင့်အားကူညီသင့်သည်။
စွန့်စားမှုစိတ်ဓာတ်များသည်တဖြည်းဖြည်းရွေ့ပြောင်းနိုင်သည်။ ဤဗဟုသုတ (သို့) စွန့်စားရမှုများအပေါ်အခြေခံထားခြင်းကသင့်အားဘဏ္newsာရေးသတင်း၊ စီးပွားရေးအချက်အလက်များကိုနားလည်ရန်နှင့်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသောအခြေအနေတွင်တည်ငြိမ်နေစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ စျေးကွက်များသည်တခါတရံတွင် 'risk-on' mode၊ နေ့များသို့မဟုတ်တစ်ခါတစ်ရံလများပြီးနောက် 'risk-off' mode သို့လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ စွန့်စားမှုစိတ်ဓာတ်များဖြင့်စျေးကွက်သတင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်စျေးကွက်သတင်းများအတွင်းရှိအဖြစ်အပျက်များ၏ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်မရေရာမှုကိုနားလည်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
စီးပွါးရေးဝန်းကျင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်သည့်အခါစီးပွားရေးအချက်အလက်များဖြန့်ကျက်မှုရှိပါကစွန့်စားရမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သတင်း၏သက်ရောက်မှုသည်စွန့်စားမှုစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုထူးခြားစေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်စျေးကွက်သည်အန္တရာယ်ရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်တင်ပြသောအချက်အလက်များကိုလျစ်လျူရှုခြင်းပြုလိမ့်မည်။
မကြာခဏစွန့်စားရသည့်စိတ်ဓာတ်အပေါ်အဓိကသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့်အခြားအရာတစ်ခုမှာမျှော်လင့်ထားသည့်ဆိုးကျိုးထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည်။ ယင်းသည်စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ထုတ်ပြန်မှု (NFP ကဲ့သို့) သည်ကျဆင်းနေသောကဏ္ sector သို့မဟုတ်စျေးကွက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
အရင်းအနှီးသည်လုံခြုံသောပိုင်ဆိုင်မှုများသို့စွန့်စားမှုများမှပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည် - နှင့်စွန့်စားမှုစိတ်ထားများသည် 'စွန့်စားမှု' မှ 'စွန့်စားမှု' မှပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ စျေးကွက်များက 'စွန့်စားမှု' စနစ်သို့ပြောင်းသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်လင်းယုန်များသည်အန္တရာယ်များသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းချခြင်းနှင့်လုံခြုံသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းတို့ဖြင့်တွားသွားလိမ့်မည်။ အဆိုးဆုံးမြင်ကွင်းတွင်စျေးနှုန်းများလျင်မြန်စွာကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးအဖြစ်အပျက်မှာသင်၏စျေးနှုန်းမြှင့်တင်ခြင်းရောင်းဝယ်မှုကိုတားဆီးပြီးမည်သည့်အဓိကမဆိုရပ်တန့်ခြင်းဖြစ်သည်။
သငျသညျအန္တရာယ်ခံစားချက်များ၏သက်ရောက်မှုကိုအပြည့်အဝနားလည်နိုင်ရန်သေချာစေရန်, အောက်မှာကျနော်တို့တိုက်ရိုက်စျေးကွက်အခြေအနေများအတွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်အခါသင်ထွက်ကြည့်ဖို့လိုအပျသောအဓိကမက်ထရစ်အချို့ကိုစာရင်းပြုစု - မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသင်သည် 'စွန့်စားမှု' သို့မဟုတ် 'စွန့်စားမှုများ' ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိမရှိ။
မဟုတ်ရင် VIX အဖြစ်လူသိများ; ၎င်းသည်မတည်ငြိမ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တိကျသောစျေးကွက်များနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲရုတ်တရက်စျေးနှုန်းတက်လာနိုင်မှုကိုတိုင်းတာသည်။
VIX သည်စတော့ရှယ်ယာများတွင်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မှု (ဖွင့်သည်ဖြစ်စေ) ကိုနားလည်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ VIX အညွှန်းကိုအများအားဖြင့် 'index index' သို့မဟုတ် 'fear gauge' ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ ဒါလည်းမင်းပါစတော့ကုန်သည်များနှင့်ရွေးချယ်စရာကုန်သည်များကစျေးကွက်၏စိုးရိမ်မှုအဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန် sed ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ဒီတစ်ခုလုံးစျေးကွက်အပေါ်မတည်ငြိမ်မှု၏အသုံးအများဆုံးညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
VIX နိမ့်လေလေ၊ စျေးကွက်ကကြောက်ရွံ့လေလေ VIX မြင့်လေလေ၊
ရှေ့သို့ရွေ့လျားမတည်ငြိမ်မှု၏စျေးကွက်မျှော်လင့်ချက်များကို S&P အညွှန်းတွင်တိုင်းတာသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အကယ်၍ VIX သည်တန်ဖိုးအောက် (၂၀) ​​ကိုထုတ်ပေးလျှင်၎င်းသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သည်ဟုယူဆရပြီး ၃၀ ထက် ပို၍ တန်ဖိုးကိုမတည်ငြိမ်ဟုရှုမြင်သည်။
ဤစျေးကွက်ညွှန်းကိန်းသည်မျက်စိကိုစောင့်ကြည့်ရန်အချိန်နှင့်တပြေးညီ Barometres များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
DJIA (Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှနှုန်း)
Bloomberg နှင့် CNBC ကဲ့သို့သောဘဏ္mediaာရေးမီဒီယာများသို့ညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့်ဤအညွှန်းကိန်းများညွှန်ကြားချက်ကိုတစ်ရက်လျှင်ကြိမ်ဖန်များစွာတွေ့ရှိနိုင်သည်။ စတော့ရှယ်ယာအညွှန်းကိန်းများကို 'down' ဟုရည်ညွှန်းသောအခါ၎င်းသည် 'off' ရှိလျှင်၊ အခြားတစ်ဖက်တွင် 'up' ဖြစ်သည့်အန္တရာယ်ကိုဆိုလိုသည်၊
အမေရိကန်ဘဏ္Treာရေးဌာနဟုရည်ညွှန်းပြီးအမေရိကန်ဘဏ္Treာရေးဌာနသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးယင်း၏ငွေချေးစာချုပ်များကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ နေ့စဉ်လည်ပတ်မှုသို့မဟုတ်စီမံကိန်းများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက်ငွေချေးစာချုပ်ထုတ်ရန် Thee bonds များကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အမေရိကန်ဘဏ္uriesာရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်သင်ရနိုင်သမျှအန္တရာယ်နှင့်ကင်းဝေးသည်ဟုယူဆကြသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုလုံခြုံသောပိုင်ဆိုင်မှုများဟုမကြာခဏယူမှတ်ကြသည်။
အမေရိကန်အစိုးရ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသောပုံသေ ၀ င်ငွေအာမခံအမျိုးအစား ၃ မျိုးရှိသည်။
သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီသည်မတူညီသောနည်းဖြင့်အကျိုးစီးပွားကိုပေးသည်၊ တစ်ခုချင်းစီတွင်ခြားနားသောရင့်ကျက်မှုနှုန်းရှိသည်၊ ၎င်းသည်လေးပတ်မှတစ်ခါတစ်ရံအနှစ်သုံးဆယ်အထိဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်ကိုအကြောင်းကြားရန်, သင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အထွက်နှုန်းနှင့်ပတ်သက်သောအစီရင်ခံစာများကိုဘဏ္mediaာရေးမီဒီယာများတွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
အထွက်နှုန်းများတက်လာသောအခါစျေးကွက်သည်အမေရိကန်အစိုးရ၏ကြွေးမြီများကိုရောင်းချနေသည်ကိုသင်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်စျေးနှုန်းတွေကျလိမ့်မယ်၊ ဤကဲ့သို့သောစွန့်စားမှုကင်းသောပိုင်ဆိုင်မှုကိုရောင်းသောအခါယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းမြင်သည်ဟုဆိုလိုသည်၊ ထို့ကြောင့်စွန့်စားမှုစိတ်ထားသည် 'စွန့်စားမှု' မှ 'စွန့်စားမှု' သို့ပြောင်းသည်။
အကယ်၍ အခြားတစ်ဖက်တွင်အထွက်နှုန်းကျဆင်းပါကဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်မှန်ကန်သောကြောင့်စျေးကွက်အစားအစိုးရ၏ကြွေးမြီများ ၀ ယ်ခြင်းကြောင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်စွန့်စားမှုသည် 'စွန့်စားမှု' အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ ဒါဟာစျေးနှုန်းတွေကိုတက်ဖို့ဖိအားပေးတာကြောင့်အထွက်နှုန်းကျဆင်းစေတယ်။
Safe Haven ငွေကြေး
လုံခြုံစိတ်ချရသောလုံခြုံသောငွေကြေးများသည်စိတ်အပြောင်းအလဲများအပေါ်လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲများအပေါ်အလွန်အမင်းအထိခိုက်မခံသောကြောင့် - ဤငွေကြေးများသည်တန်ဖိုးမြှင့်ရန်သို့မဟုတ်စွန့်စားမှုမရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်၎င်း၏တန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်စတော့ဈေးကွက်နှင့်မတူဘဲ Forex နေရာသည် ၂၄/၇ ဖွင့်လှစ်ထားသောကြောင့်တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီစိတ်မချမ်းမြေ့စရာများကိုသင်စောင့်ကြည့်နိုင်လိမ့်မည်။
ဆွစ်ဖရန့် (CHF) သည်အလွန်အားကောင်းနေသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းကကမ္ဘာ့ဘဏ္yearsာရေးစျေးကွက်သည်အကျပ်အတည်းများစွာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသော်လည်းဆွစ်ဇလန်သည်ခိုင်မြဲသောပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
တည်ငြိမ်သောစီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်ခိုင်မာသောငွေကြေးနှင့်ဘဏ္fiscalာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများကြောင့် CHF သည်လုံခြုံသောငွေကြေးဖြစ်သည်။ ဘဏ္investorsာရေးအကျပ်အတည်းကာလ၌နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဆွစ်ဇာလန်သို့ပင်ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုလူသိများကြသည်။
စျေးကွက်နှောင့်ယှက်မှု (များသောအားဖြင့်ဥရောပ၌) ရှိကြောင်းသေချာသည့်လက္ခဏာမှာ CHF သည်အထွက်နှုန်းမြင့်မားသည့်ငွေကြေးများထက်ပိုမိုအားကောင်းလာသောအခါဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ငွေကြေးကုန်သည်များသည် CHF ၏လုံခြုံမှုသို့လွတ်မြောက်ရန်လမ်းပြလိမ့်မည်။
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်က 'စွန့်စားရမှု' ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖော်ပြသည်။
၎င်းသည် USD ၏အင်အားကြောင့် 'စွန့်စားမှု' စိတ်ဓာတ်၏ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အမေရိကန်ဒေါ်လာသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ထွန်းသောငွေကြေးများထက် USD ထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်ဟုသတင်းများကအကောင့်အားလုံးအရဆိုလျှင်စျေးကွက်သည်မကြာသေးမီကဘဏ္newsာရေးသတင်းနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမနှစ်သက်ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့်ယင်းသည် USD ကိုလုံခြုံသောနေရာအဖြစ်ရှာသောစျေးကွက်များဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သင်၏လုံခြုံသောနေရာအဖြစ်အမေရိကန်ဘဏ္treာရေး ၀ ယ်ရန်သင်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာအချို့ဝယ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည် (အကယ်၍ သင့်မှာမရှိသေးလျှင်) ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအမြောက်အများကတစ်ပြိုင်နက်တည်းလုပ်ဆောင်သောအခါ USD ၏တန်ဖိုးပေါ်လာလိမ့်မည်။
ဤသည်မှာ 'စွန့်စားမှု' ခံစားချက်နောက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဂျပန်ယန်းသည်အထွက်နှုန်းမြင့်မားသောငွေကြေးများထက်ပိုမိုခိုင်မာသည်ဟုအစီရင်ခံစာကဆိုပါက ထပ်မံ၍ စျေးကွက်သည်ဒေတာ (သို့) သတင်းများကိုမနှစ်သက်ပါ၊ JPY အားလုံခြုံသောနေရာအဖြစ်ရှာရန်ဖြစ်နိုင်သည် (အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ပတ်သက်လျှင်) ။
ငွေကြေးအတွဲနှစ်ခုက ကျွန်ုပ်တို့ကို စောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ NZD / JPY လည်း AUD / JPY. အရေးကြီးသည်မှာ၊ ဤအတွဲနှစ်ခုသည် အလွန်ရေပန်းစားသော 'သယ်ဆောင်' ကုန်သွယ်မှုများဖြစ်သည် (၎င်းကို မဟာဗျူဟာအပေါ် အန္တရာယ်အဖြစ် ရည်ညွှန်းသည်)။ ဤငွေကြေးအတွဲနှစ်ခုတွင် ရုတ်တရက် ကျဆင်းသွားခြင်းသည် အန္တရာယ်ကို မနှစ်သက်ခြင်း၏ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ခန့်မှန်းရခက်လွန်း။ USD, JPY နှင့် CHF တို့သို့ယေဘုယျအားဖြင့်လုံခြုံမှုမှထွက်ပြေးကြလိမ့်မည်။ NZD / JPY နှင့် AUD / JPY များမြင့်တက်လာပါက၎င်းသည်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ချက်သည်ယခုအခါ 'စွန့်စားရမှု' ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်
အဘယ်အရာကိုမျှ 100% အန္တရာယ်ကင်းမဲ့သည်
မင်းကိုချိုးဖောက်မိလို့စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကြံ့လိုလို ၁၀၀% စွန့်စားရမှုမရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကပြောတာက မဟုတ် တည်ရှိ အမြဲတမ်းလုံခြုံမှုရှိနိုင်သော 100% 'စွန့်စားမှု' ဖြစ်ရန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိပါ။
အအေးခဲသည့်ငွေနှင့်ပတ်သက်လျှင်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်သင်သည်သင်၏ ၀ ယ်ယူနိုင်စွမ်းကိုငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြောင့်တဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထိုစွန့်စားမှုသည်အမြဲတမ်းတည်ရှိလိမ့်မည်။ တကယ်တော့ 'risk-on' နှင့် 'risk-off' သည်စျေးကွက်၏သဘောထားကိုဖော်ပြရန်အသုံးအနှုန်းများသာဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ပုံစံများကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြီးအနာဂတ်မှာဖြစ်ပျက်မယ့်အရာတွေကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်အောင်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုတာသမိုင်းမှာစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်။ ပုံစံများနှင့်အနာဂတ်လှုပ်ရှားမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ရန်အတွက်။ နည်းပညာဆိုင်ရာသုံးသပ်မှုသည်အရှိန်အဟုန်၊ ထောက်ခံမှုနှင့်ခုခံမှုကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်စျေးနှုန်းဇယားကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကုန်သည်များကိုပိုမိုမြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကုန်သွယ်မှုများကို ၀ င်ရောက်ထွက်ခွာရန်ကူညီသည်။
များသောအားဖြင့်တည်ငြိမ်သောပုံစံကိုစျေးနှုန်းများနှင့်ထွန်းသစ်စခေတ်ရေစီးကြောင်းများကလိုက်နာလိမ့်မည်။ ထူထောင်သောပုံစံသည်စျေးကွက်ရူပဗေဒပညာ၏ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်သည်။ အယူအဆမှာစျေးကွက်ရှိအဖွဲ့ ၀ င်များသည်နှိုင်းယှဉ်သောအခြေအနေနှင့်ကြုံတွေ့ရသောအခါစျေးကွက်ထဲမှအဖွဲ့ဝင်များသည်နှိုင်းယှဉ်သည့်နည်းဖြင့်မကြာခဏတုံ့ပြန်ကြလိမ့်မည်။ ကုန်သွယ်ရေးထွက်ပေါက်များ / ၀ င်ခွင့်များအတွက်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည့်မည်သည့်ပုံစံကိုမဆိုရှာဖွေရန်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်နည်းပညာညွှန်းကိန်းများနှင့်စျေးနှုန်းဇယားများကိုအသုံးပြုသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်နောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကိုတိုင်းတာရန်ဘယ်တော့မှကြိုးစားမည်မဟုတ်ပါ။
အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအကြားကြီးမားသောကွာခြားချက်မှာနည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သမိုင်းဆိုင်ရာပမာဏနှင့်စျေးနှုန်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးအခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်၎င်း၏အနာဂတ်ကိုအာရုံစိုက်စေသည်။ ထို့ကြောင့်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများ၏သမိုင်းကိုလေ့လာခြင်းသည်အနာဂတ်စျေးနှုန်းများနှင့်ကုန်သွယ်မှုအလေ့အထများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။
မကြာခဏနည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့ရှိသည်သော Forex ကုန်သည်များအကြားကျယ်ပြန့်စွာယုံကြည်ကြသည်, စျေးနှုန်းပုံစံများကိုများသောအားဖြင့်လိုင်းဆင်းနောက်ထပ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြန်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ၎င်းက၎င်းတို့အားအတိတ်ကာလကငွေကြေးအတွဲတစ်ခုနှင့်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုစစ်ဆေးရန်ကူညီပေးသည် - ထိုနေရာမှထွက်ရန် (သို့) နေရာတစ်ခုသို့ ၀ င်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အခါဤအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုမည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏အဓိကအချက်မှာစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများ၏စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်မည့်အစား၊ ပစ္စည်းတစ်ခု၏စျေးနှုန်းသည်ရရှိနိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုထင်ဟပ်နိုင်သည်။ စျေးကွက်၏ရောင်းလိုအားနှင့် ၀ ယ်လိုအားကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကဘယ်လမ်းကြောင်းကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်။
ကုန်သည်တွေကအတိုးရောင်းတာလား၊ ရောင်းတာလား၊ မရောင်းတာလားဆိုတာသိနိုင်တယ်။
သင်စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်သူများကနောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ရန်စီစဉ်နိုင်သည်ဟုသင်ထင်သောအရာကိုနိဂုံးချုပ်နိုင်သည်
မကြာသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့သောစျေးနှုန်းတိုးတက်မှုများကြောင့်ရောင်းသူများနှင့် ၀ ယ်သူများသည်မည်သို့စဉ်းစားနေမည်ကိုသင်ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။
'အခြေခံ' သို့မဟုတ်မက်ခရိုစီးပွားရေးအခြေအနေများအားငွေကြေးအတွဲ၏တန်ဖိုးသို့အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ စျေးကွက်ကအရာအားလုံးကိုမှတ်သားထားတယ်။ စျေးကွက်အတွင်း ၀ ယ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများကြောင့်အလုပ်အကိုင်အစီရင်ခံစာများနှင့်အတိုးနှုန်းများကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များကိုအလိုအလျောက်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။
စျေးကွက်စတင်ရွေ့လျားလာသောအခါနည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်မည်သည့်အချိန်တွင်စျေးကွက်ထဲ ၀ င်မည်၊
ထို့ကြောင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုသည်လမ်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။ စျေးကွက်၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကတိုတောင်းသည်။ ၎င်းသည်အချိန်ဘောင်များသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းဇယားများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
အခြေခံအားဖြင့်တော့စျေးကွက်ထဲမှာဆိုရင်သူတို့မှာရွေးချယ်စရာသုံးမျိုးပဲရှိတယ်။ သူကအောက်ကိုဆင်း၊ တက်၊ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်စျေးနှုန်းများသည် zig-zag တွင်ရွေ့သွားလိမ့်မည်။
လမ်းကြောင်းသစ်ဖြေ - စျေးနှုန်းကျဆင်းမှုနှုန်း (zownt-zag zag-zag) ဟာနိမ့်ကျနေတဲ့ဈေးနှုန်းထက်မြင့်တက်နေတယ်။
အကွာအဝေးဖြေ - စျေးနှုန်းကအနိမ့်ဆုံးပဲ။
ပုံစံဇယားများ: စျေးနှုန်းများအဓိကဇယားပုံစံများကိုအစက်အပြောက်က ဦး ဆောင်နေကြသည်ဘယ်မှာခန့်မှန်း။
ဈေးနှုန်း: စျေးကွက်တွင်မည်သည့် ဦး တည်ရာကိုသိရှိနိုင်ရန်ဇယားလိုင်းများစသည်တို့ကိုဆွဲခြင်းနှင့်၎င်းသည်အတိတ်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ဒါကြောင့်မေးခွန်းပေါ်လာတယ် - နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဟာတကယ်အရေးကြီးသလား။ လာမယ့်အပိုင်းမှာတော့ကျနော်တို့နောက်ထပ်ဒီစိတ်ဓါတ်များစူးစမ်း။
အဲဒါဟုတ်ပါတယ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သင်မည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှထွက်ခွာမည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရုံသာမကမည်သည့်နေရာတွင် ၀ င်ရောက်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်နိုင်သည့်အတိတ်ကာလပုံစံများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြစ်နိုင်ခြေများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းကောင်းများဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုရွေးချယ်ခြင်းအတွက်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အလွန်အထောက်အကူပြုသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဇယားပုံစံများသည်နည်းပညာဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်း၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်။ မျဉ်းကွေးများသို့မဟုတ်လိုင်းများစွာကို အသုံးပြု၍ ဇယားပုံစံသည်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု၏ရုပ်ပုံဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ လူ့အပြုအမူကဲ့သို့သောအချက်များသည်ဘဏ္assetာရေးပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏ကုန်ကျစရိတ်အတက်အကျကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤပုံစံများသည်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏အခြေခံဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းနှင့်လမ်းကြောင်းသစ်လှုပ်ရှားမှုများကိုခွဲခြားသိမြင်စေသည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်ကိုယ်တိုင်ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကပုံစံများကိုမည်သို့ရှာဖွေတွေ့ရှိရမည်ကိုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နားလည်မှုရှိခြင်းကသင်၏စျေးနှုန်းသည်မည်သည့်နေရာသို့သွားမည်ကိုခန့်မှန်းရန်သင့်အခွင့်အလမ်းများကိုများစွာတိုးတက်စေနိုင်သည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။ အသုံးအများဆုံးဇယားပုံစံအမျိုးအစားမှာလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ဒဏ္antsာရီများ၊ အလံများ၊ အုတ်ရိုးများ၊ နှစ်ဆနှင့်သုံးဆထိပ်များနှင့်ခေါင်းနှင့်ပခုံးပုံသဏ္asာန်များရှိသည်။
မှတ်သားထိုက်သည်မှာပုံစံများကိုစက္ကန့်မှလမှမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် tick များကိုဘား၊ လိုင်းသို့မဟုတ်ဖယောင်းတိုင်ဇယားထဲသို့ပေါင်းထည့်လိမ့်မည်။ ဇယားပုံစံသည်သိပ္ပံနှင့်ရူပဗေဒအပေါ်တွင်မတည်ပါ။ သူတို့၏အောင်မြင်မှုသည်စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်သူအရေအတွက်အပေါ်များစွာမူတည်သည်။
ဆက်လက်ဇယားပုံစံများ - ဆက်တိုက်ပုံစံများတွင်အလံပုံစံများ၊ တံခွန်ပုံစံများနှင့်တြိဂံပုံစံများပါ ၀ င်သည် - ဤပုံစံသည်ကုန်သည်များအနေဖြင့်လမ်းကြောင်းသစ်ကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုထူထောင်ရန်ကူညီသည်။
ပြောင်းပြန်ဇယားပုံစံများ: အသုံးပြုသောအသုံးအများဆုံးစကားစုမှာ "လမ်းကြောင်းသစ်သည်သူရောနှောနေသည့်အချိန်အထိသင်၏မိတ်ဆွေဖြစ်သည်" ဖြစ်သည်။ ပြောင်းပြန်ပုံစံများခေတ်ရေစီးကြောင်းပြီးဆုံးဘယ်မှာရှာဖွေရန်ကြိုးစား, ဒါကြောင့်ဆက်လက်ပုံစံများ၏လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်။ ဤနေရာတွင်ရည်မှန်းချက်မှာလမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
အချက်အလက်များဇယားပုံစံများသည်အချိန်အပိုင်းအခြားအမျိုးမျိုးကို ဖြတ်၍ အလုပ်လုပ်သောကြောင့်ဤပုံစံများသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည် (စျေးနှုန်းပိုမိုကြီးမားသောစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကြားတွင်ထပ်တလဲလဲပုံစံ) ။
နည်းပညာကုန်သည်များ၏ယေဘူယျသဘောတူညီမှုသည်စျေးနှုန်းသည်ရူပဗေဒအရထင်မြင်ယူဆချက်ကဲ့သို့သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးနှင့်စျေးနှုန်းအပေါ်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဇယားပုံစံများသည်ငွေကြေး၊ စတော့ရှယ်ယာ၊ ငွေချေးစာချုပ်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများမှသည် cryptocurrencies အထိပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းတိုင်းကိုလေ့လာသည်။
စျေးကွက်စိတ်ပညာသည်ဇယားပုံစံများအတွက်တွန်းအားဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းအားလုံးနှင့် ၄ င်းတို့၏ပုံသဏ္ာန်များသည်အရောင်းနှင့် ၀ ယ်လိုသောဖိအားများ (ပုံပြလမ်းညွှန်ကို အသုံးပြု၍) မှထင်ဟပ်သည်။ ဤစျေးနှုန်းများကိုပုံသွင်းရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည့်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်အင်အားမှာ ၀ ယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားဖြစ်သည်။
၀ ယ်လိုအားနှင့် ၀ ယ်လိုအားနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာနိယာမနိယာမများကဇယားပုံစံများကိုမည်ကဲ့သို့ရောင်းဝယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်ကိုအရေးမကြီးဟုဆိုလိုသည်။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်သွယ်မှုဇယားပုံစံများကိုအပေါ်မှအောက်သို့ချဉ်းကပ်ရန် ဦး ဆောင်သည့်အဆင့်သုံးဆင့်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ နေ့စဉ်ဇယားနှင့် ၄ နာရီကိုစျေးကွက်တွင် ဦး စားပေးနိုင်သည် လွှဲကုန်သွယ်.
၅ မိနစ်နှင့် ၁၅ မိနစ်အတွင်းတစ်နေ့တွင်းဇယားများကိုအသုံးပြုသည် ဉီးခေါင်းရေ စျေးကွက်နှင့် တစ်ရက်ကုန်သွယ်.
အပတ်စဉ် - လစဉ်အနေအထားသည်ကုန်သွယ်မှုအတွက်ကောင်းမွန်သည်
သင်ရွေးချယ်ထားသည့်အချိန်အပိုင်းအခြားပေါ် မူတည်၍ ထိုအချိန်ကာလအတွက်အဓိကလမ်းကြောင်းကိုသင်ခွဲခြားသတ်မှတ်သင့်သည်။
သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုအခြေခံပြီးကုန်သွယ်မှုကိုအဆုံးသတ်ရန်မှာသင်နောက်ဆုံးလိုချင်တဲ့အရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်မူဘောင် တစ်ခုမှလွဲ၍ ဇယားပုံစံများပေါ်တွင်သာ အခြေခံ၍ ကုန်သွယ်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမပြုလုပ်ပါနှင့်။
အကယ်၍ သင်သည်ဈေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကိုယ်တိုင် ထပ်မံ၍ ပညာသင်ယူလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဖတ်သင့်သောစာအုပ်များဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သောအထောက်အကူပြုစာအုပ်များပြုစုထားပြီးပြီ။
Alexander လူနေမှုဘ ၀ အတွက်အရောင်းအ ၀ ယ် - အလက်ဇန်းဒါးအန်းဒါးမှရူပဗေဒ၊ အရောင်းအ ၀ ယ်၊ နည်းဗျူဟာ၊ ငွေစီမံခန့်ခွဲမှု
ဤစာအုပ်သည်3M's ၏အကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ပိုက်ဆံ, စိတ်, နှင့်နည်းလမ်း။ 'လူနေမှုဘ ၀ အတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်' လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သုံး ဦး စလုံးကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
Trading ကျွန်ုပ်၏အရောင်းခန်းသို့လာပါ။ ကုန်သွယ်ရေးအတွက်လမ်းညွှန်ပြည့်စုံ - အလက်ဇန်းဒါးအကြီးအကဲ
ဒေါက်တာအလက်ဇန်းဒါးသည်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ မဟာဗျူဟာနှင့်ငွေကြေးရောင်း ၀ ယ်ခြင်းမှသည်အမြတ်အစွန်းရရှိနိုင်သောအလားအလာရှိသောညွှန်းကိန်းများအထိအရာရာကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။
ကုန်သွယ်မှုအခြေခံမှသည်ဇီဝဗေဒနည်းနာများအထိဤစာအုပ်သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အောင်မြင်သောကုန်သည်တစ် ဦး သို့ဝင်ရောက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
the ဇုန်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ် - မာ့ခ်ဒူဂလပ်စ်ကယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ စည်းကမ်းနှင့်အနိုင်ရရှိသည့်သဘောထားဖြင့်စျေးကွက်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ။
ဤစာအုပ်ကိုရေးသားသူ Mark Douglas သည်အလွန်ကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်၊ စက်မှုအတိုင်ပင်ခံနှင့်ကုန်သွယ်ရေးနည်းပြဖြစ်သည်။
ကုန်သည်များအနေဖြင့်မိမိတို့နှင့်မိမိတို့ကုန်သွယ်ပုံကိုပိုမိုနားလည်စေရန်ဤစာအုပ်တွင်အဓိကပြmainနာငါးခုရှိသည်။ ဤနေရာတွင်အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကုန်သည်များအားစတော့ရှယ်ယာများရွေးချယ်ခြင်း၊ စျေးကွက်နှင့်ပတ်သက်သောဒဏ္,ာရီများနှင့်အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ခြင်းများကိုကူညီရန်ဖြစ်သည်
Financial ဘဏ္Freedomာရေးလွတ်လပ်ခွင့်သို့သွားသောလမ်းကို Van K. Tharp မှကူးယူပါ
ဤသည်မှာစျေးကွက်တွင်မည်သို့ကုန်သွယ်ရမည်ကိုလက်တွေ့ကျသောရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘုံထောင်ချောက်များ၏ကြီးမားသောရှင်းပြချက်ဖြင့်အောင်မြင်သောကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်အကြံပေးချက်များဖြစ်သည်။
မည်သည့်အထူးအစီအစဉ်ဖြင့်မဆိုစာအုပ်၏အဓိကအာရုံစိုက်မှုမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - သင်၏ကိုယ်ပိုင်စနစ်ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်၊ စိတ်ထားဖွင့်ရမည်၊ ထွက်ပေါက်မဟာဗျူဟာများနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောမျှော်လင့်ချက်။
🥇ဂျပန်ဖယောင်းတိုင်ဇယားဆွဲနည်းစနစ်များ - စတိဗ်နစ်ဆင်မှ
စတိဗ်နစ်ဆင်သည်ဤလူကြိုက်များသောနည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသည်။ မီးခွက်များဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ပုံစံများကိုနားလည်ခြင်းမှအမျိုးမျိုးသောနည်းပညာဆိုင်ရာနည်းပညာများအထိအရာအားလုံးပါ ၀ င်သောဤစာအုပ်သည်အလွန်ပညာရေးဆိုင်ရာဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။
ဤသည်ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပြီးမီးခုံဇယားဖြင့်မည်သည့်နေရာတွင်စတင်ရမည်ကိုမသိသောသင်တို့အတွက်သူများ Layman ၏ဝေါဟာရများအားလုံးကိုရှင်းပြသည်။
Price Action Trading အတွက်အကောင်းဆုံးပွဲစားများနှင့်ပလက်ဖောင်းများ
အကယ်၍ သင်ဤအရာကိုဝေးဝေးအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါကယခုစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုသည်မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်ယခုအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ထားသင့်ပြီး၊ အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များက၎င်းကိုရေတိုနှင့်ရေရှည်မဟာဗျူဟာတစ်ခုအဖြစ်အဘယ်ကြောင့်ကျိန်ဆိုကြသနည်း။
ထို့ကြောင့်ပဟေofိ၏နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာသင်လေ့လာပြီးအသစ်သောစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အွန်လိုင်းပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ အောက်တွင်သင်အထူးသဖြင့်ပလက်ဖောင်းငါးခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများ၊ အနိမ့်ကျသောအခကြေးငွေများနှင့်တင်းကြပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုပေးသည်။
AVATrade သည်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သွယ်မှုကိုကျင့်သုံးရန်သင်ရှာဖွေနေလျှင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ပွဲစားသည် MT4 ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံသည် - သင်ပလက်ဖောင်း၏သရုပ်ပြအကောင့်မှသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်သည်စျေးကွက်အခြေအနေများတွင်ကုန်သွယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်၊ သင်သည်အမှန်တကယ်ငွေစာရင်းဖွင့်နိုင်သည်။
AVATrade သည်မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်မဆိုငွေမပေးရ၊ ပြန့်နှံ့မှုသည်အလွန်နည်းသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်သင်သည် Forex အတွဲများကို ၀.၉ လက်ဖြင့်သာရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအနေဖြင့်၊ ၀ ယ်ယူသူအသစ်များကိုစာရင်းသွင်းရန်အတွက်ကြိုဆိုပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုသည်ကုန်သွယ်ရေးသည်စာပေစာအုပ်များကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲပြီး၎င်းကိုသင့်အားအခြေခံသို့ပြန်ပို့ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသီအိုရီသည်ရိုးရှင်းခြင်းကိုသင်ကြားပေးသည်။ သင်ဒီမှာနှင့်ယခုဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများအပေါ်အတိတ်အာရုံစိုက်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်။ သင်ရိုးရှင်းစွာသင်ကြားသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုအပြည့်အ ၀ ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်စျေးနှုန်းအရေးယူခြင်းကုန်သွယ်ရေးသည်အဘယ်နည်း၊ ရေရှည်တွင်ကျွမ်းကျင်ရန်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးကြောင်းသင်ယခုနားလည်သဘောပေါက်ပြီဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
များသောအားဖြင့်စျေးကွက်အရေးယူခြင်းသည်အလယ်အလတ်နှင့်ရေရှည်ကုန်သွယ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လွှဲကုန်သွယ်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။ သို့သော်များစွာသောသူတို့ကထိုကုန်သည်များသည်ဈေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သွယ်မှုကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်သည်ဟုငြင်းခုန်ကြလိမ့်မည် - သီအိုရီအများစုမှာစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၊ နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သင်၏ရေရှည်ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သင့်သည်။
စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သွယ်မှုသည်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်သီအိုရီတစ်ခုဖြစ်သည်၊ စနစ်ကျသောလုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ပါ။
ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ တစ်ဖက်တွင်စျေးနှုန်းရောင်းဝယ်မှုသည်ပုံစံနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိကုန်သည်များကအသုံးပြုသင့်သောမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအရာများဖြင့်သင်ယူရန်မှာအချိန်များစွာကြာနိုင်သည် - ထို့ကြောင့်သင်ယူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစာမျက်နှာတွင် ထပ်မံ၍ စျေးကွက်ထဲရှိလက်ရှိစျေးကွက်ထဲတွင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့်ဈေးနှုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှုစာအုပ်များကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။